ဥစ္စာစောင့်ဆီက ငွေကျပ်ပြားတစ်ပြားရရင် အဲဒီကျပ်ပြားဟာ သုံးလို့မကုန်တော့ဘူး . . တဲ့ ။ – Amara News
ဥစ္စာစောင့်ဆီက ငွေကျပ်ပြားတစ်ပြားရရင် အဲဒီကျပ်ပြားဟာ သုံးလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့။ ဟုတ်လို့လား။ ဟုတ်လို့လား။ မှတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်ကို ပြောတာပဲ။ သူ့အစ်ကို ညွန့်ဟန်ကလည်း ပြောတယ်။
”ဥစ္စာစောင့်ဆီက ကျပ်ပြားတစ်ပြားသာရ။ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ မုန့်ဝယ်စားရင် တစ်မတ်စေ့တော့ ချန်ထားလိုက်။ ညကျရင် တစ်မတ်စေ့လေးကို ငွေဖလားထဲထည့်ပြီး
ဘုရားစင်ပေါ်တင်ထားလိုက်ကွာ။ မနက်ကျရင် ငွေဖလားထဲမှာ ကျပ်ပြားစေ့လေးကို မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်”
”မင်းကော ဥစ္စာစောင့်ဆီက တစ်ကျပ်စေ့ ရဘူးလား”
”ငါ မရဘူးလို့ပေါ့ကွာ၊ ရရင် နေ့တိုင်း ဝက်သားပေါက်စီ ဝယ်စားမှာပေါ့။ အဲဒါကလည်း ထိုက်မှရတာ”
”မင်း ကံကောင်းရင် ရပြီပေါ့ကွာ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းနဲ့ ဥစ္စာစောင့်ဟာ ဟိုဘဝက အမျိုးတော်ရင် ရပြီပေါ့”
”အဲဒါဆို ကျပ်ပြားစေ့ဟာ ငါနဲ့ ထိုက်ပြီပေါ့”
ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်အိမ်မှာ မုန့်မစားရတဲ့ကောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေနဲ့အဖေကလည်း ကျွန်တော့်ကို မုန့် အငတ်မထားပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက် ဂိုးလ်ဒင်းဘတ်တွေ အမြဲဝယ်ထားတယ် သံဘူးနဲ့။ ကျွန်တော်ကျောင်းသွားရင်လည်း မုန့်ဖိုးရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဥစ္စာစောင့်ပေးတဲ့ တစ်ကျပ်စေ့ကို လိုချင်တယ်။ အဲဒီတစ်ကျပ်စေ့ကို အကုန်သာ သုံးမပစ်လိုက်နဲ့။ ဘယ်တော့မှ ကုန်မသွားဘူး။ လျှော့မသွားဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က သဘောကျတာ။
ကျွန်တော်သာ ဥစ္စာစောင့်ဆီက တစ်ကျပ်စေ့ရရင် အမေ့ကို ဥစ္စာစောင့်က ပိုက်ဆံပေးတယ်ဆိုတာတော့ မပြောဘူး။ တော်ကြာ အမေက ကျွန်တော့်ကို မုန့်ဖိုးပိုက်ဆံ မပေးတော့ရင် ခက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥစ္စာစောင့်တွေက ဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ အမေများ သိမလား။
”အမေ သရဲတွေက အထီး၊ အမ ရှိလားဟင်”
”သရဲထီး၊ သရဲမ ရှိတာပေါ့ ငါ့သားရယ်”
”ဒါဖြင့် ဥစ္စာစောင့်တွေကတော့ အထီးနဲ့ အမရှိတာလား အမေ”
”အမေတော့ ဥစ္စာစောင့်မတွေကိုပဲ ကြားဘူးတယ်”
”ဥစ္စာစောင့်မတွေကို အမေကော မြင်ဘူးသလားဟင်”
”အမေတော့ မမြင်ဘူးပါဘူးကွယ်။ ဥစ္စာစောင့်မတွေဟာ ဆံပင်အရှည်ကြီးနဲ့ မျက်နှာကလည်း သနပ်ခါးဖွေးပြီး လှတယ်။ အနံ့ကလည်း သင်းတယ်လို့ ပြောကြတာတော့ ကြားဘူးတယ်”
”သဘောကောင်းတယ်လည်း မမှတ်နဲ့ ငါ့သားရယ်။ သူတို့က သူတို့နေရာမှာ လူလဲတတ်တယ်”
”ဘယ်လို လူလဲတာလဲ အမေ”
”ဥစ္စာစောင့်ဘဝမှာ ကြာလာတော့ ပျင်းရိငြီးငွေ့မှာပေါ့ကွယ်။ ဘုရားရဲ့ ရတနာသိုက်ကိုလည်း စောင့်ဖို့ တာဝန်ရှိတော့ သူ့နေရာကို လူတစ်ယောက်နဲ့ အစားထိုးဖို့ လူရဲ့ဝိညာဉ်ကို သူတို့က နှုတ်သွားတာပေါ့”
”သူတို့က ဘုရားတွေမှာ တာဝန်ထမ်းတာလား”
”အေးပေါ့။ သိုက်တူးတဲ့လူတွေ မလာအောင်လို့ပေါ့”
”သူတို့က တစ်ခါတလေ လူလိုအယောင်ဆောင်ပြီး ဘုရားပွဲတွေမှာ ဈေးတောင် ဝယ်တတ်တယ်တဲ့ သားရဲ့။ ပိုက်ဆံရှိလို့နေမှာပေါ့”
”သူတို့က မိန်းမအချင်းချင်းကိုပဲ ဝိညာဉ်နုတ်မှာပါ အမေရာ။ ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးပဲ။ ကျွန်တော့် ဝိညာဉ်ကို သူတို့ မနုတ်ပါဘူး”
”လူဆိုတာ ခုဘဝမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမယ့် နောက်ဘဝမှာ မိန်းမလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ သူများသားမယားကို ကျူးလွန်ရင် နောက်ဘဝမှာ မိန်းမရှာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ”
အမေက ပြောပြနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လှတဲ့ဥစ္စာစောင့်ဆီက ကျပ်ပြားစေ့ကို လိုချင်နေတယ်။ အဲဒါကို အမေ သိနေသလား။
”ဘုရားတွေထဲ တစ်ယောက်တည်း သွားမထိုင်နဲ့နော်။ ဥစ္စာစောင့်က လူကိုချစ်ရင်လည်း သူတို့ဆီ ခေါ်ထားတတ်တယ်။ ဥစ္စာစောင့်က ငါ့သားကို ဝှက်ထားရင် အမေ မရှာဖွေတတ်ဘူးနော်”
ကျွန်တော်က သပြေပန်းချိုးပြီး ဘုရားညောင်ရေအိုး ထိုးတယ်။ အုတ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရင်း ကျပ်ပြားစေ့တစ်စေ့ တွေ့မလားလို့ အမြဲရှာဖွေတယ်။ ဘုရားပန်းအိုးထိုးတာကို ဥစ္စာစောင့်မက သဘောတွေကျပြီး ကျွန်တော့်ကို ကျပ်ဒင်္ဂါးပြား တစ်စေ့လောက် လက်ဆောင်ပေးရင်တော့ ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါပြီ။
အဲဒီလို ဘုရားမှာ သပြေညွန့်သွားထိုး၊ ညောင်ရေအိုး ရေလဲ၊ အုတ်ပလ္လင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ သောက်တော်ရေခွက်လေးနဲ့ ဘုရားကို သောက်တော်ရေကပ်လုပ်တာ တစ်လကျော်ကြာသွားပါတယ်။ တစ်မနက်ခင်းပေါ်မှာ ဘုရားရဲ့ အုတ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျပ်ပြားစေ့လေးကို တကယ်တွေ့တယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုကို ပျော်မှန်းမသိဘူး။ ထီပေါက်တာက အဲဒီလိုလား။
အိမ်မှာလည်း ငွေဖလားလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ အမေက ငွေဖလားလေးကို မသုံးပါဘူး။ ဒီအတိုင်း သိမ်းထားတာ။ အဲဒီငွေဖလားလေးထဲမှာ ကျပ်ပြားစေ့လေးကို ထည့်လိုက်တယ်။ ဘုရားစင်ရဲ့ ထောင့်လေးတစ်နေရာမှာ အမေလည်း မမြင်သာအောင် တစ်ညထားတယ်။ နောက်နေ့မှာ အဲဒီကျပ်ပြားစေ့နဲ့ ကျောင်းမှာ တရုတ်ကြီး ဆန်ခေါက်ဆွဲ တစ်မတ်ဖိုး ဝယ်စားတယ်။ သူက မတ်စေ့သုံးစေ့ အမ်းတယ်။ ညကျ အဲဒီမတ်စေ့ သုံးစေ့ကို ငွေဖလားထဲထည့်တယ်။ ဘုရားစင်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ကျွန်တော်က အသာလေးတင်ထားတယ်။
နောက် မနက်ခင်းမှာ ငွေဖလားလေးထဲမှာ ကျပ်ပြားစေ့ ဖြစ်နေပြီအထင်နဲ့ ကျွန်တော် သွားကြည့်တယ်။ မတ်စေ့သုံးစေ့ဟာ သုံးစေ့ပါပဲ။ နောက်တစ်နေ့…နောက်တစ်နေ့ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားစင်ရဲ့ ထောင့်လေးတစ်နေရာက ငွေဖလားလေးထဲကို ကြည့်တာပဲပေါ့။ တစ်မတ်စေ့ သုံးစေ့ဟာ တစ်မတ်စေ့ သုံးစေ့ပဲပေါ့။ ဘယ်တော့မှ ကျပ်ပြားစေ့ ပြန်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေမယ့်၊ သနပ်ခါးနံ့တွေလည်း သင်းထုံနေမယ့်၊ ဆံပင်ကလည်း ရှည်လျားတဲ့ ဥစ္စာစောင့်ဟာ ကျွန်တော့်ကို ညာခဲ့ပြီလား။
နောက်ရက်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲက အာရုံခံတန်ဆောင်းထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားညောင်ရေအိုး သွားလဲတယ်။ အဲဒီမယ် မျက်နှာပေါ်မှာ ကျောက်ပေါက်မာတွေနဲ့ ရွာထဲက မပုကြွေကို တွေ့ရတယ်။ သူကလည်း ဘုရားကို ပန်းလာကပ်တာ။
”ဟဲ့ကောင် ဟိုရက်က ဒီဘုရားရဲ့ အုတ်ပလ္လင်ပေါ်မှ ငါ ကျပ်ပြားတစ်စေ့ ကျကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ နင် တွေ့လား” တဲ့။
”မတွေ့ပါဘူး မပုကြွေရာ”လို့ ကျွန်တော်ပြောပြီး အဲဒီနေရာကနေ ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ။
ဥစ်စာစောငျ့ဆီက ငှကေပျြပွားတဈပွားရရငျ အဲဒီကပျြပွားဟာ သုံးလို့မကုနျတော့ဘူးတဲ့။ ဟုတျလို့လား။ ဟုတျလို့လား။ မှတျကွီးဆိုတဲ့ကောငျက ကြှနျတေျာ့ကို ပွောတာပဲ။ သူ့အဈကို ညှနျ့ဟနျကလညျး ပွောတယျ။
”ဥစ်စာစောငျ့ဆီက ကပျြပွားတဈပွားသာရ။ အဲဒီပိုကျဆံနဲ့ မုနျ့ဝယျစားရငျ တဈမတျစတေ့ော့ ခနျြထားလိုကျ။ ညကရြငျ တဈမတျစလေ့ေးကို ငှဖေလားထဲထညျ့ပွီး ဘုရားစငျပျေါတငျထားလိုကျကှာ။ မနကျကရြငျ ငှဖေလားထဲမှာ ကပျြပွားစလေ့ေးကို မငျးတှရေ့လိမျ့မယျ”
”မငျးကော ဥစ်စာစောငျ့ဆီက တဈကပျြစေ့ ရဘူးလား”
”ငါ မရဘူးလို့ပေါ့ကှာ၊ ရရငျ နတေို့ငျး ဝကျသားပေါကျစီ ဝယျစားမှာပေါ့။ အဲဒါကလညျး ထိုကျမှရတာ”
”မငျး ကံကောငျးရငျ ရပွီပေါ့ကှာ။ ဒါမှမဟုတျ မငျးနဲ့ ဥစ်စာစောငျ့ဟာ ဟိုဘဝက အမြိုးတျောရငျ ရပွီပေါ့”
”အဲဒါဆို ကပျြပွားစဟေ့ာ ငါနဲ့ ထိုကျပွီပေါ့”
ကြှနျတျောဟာ ကိုယျ့အိမျမှာ မုနျ့မစားရတဲ့ကောငျတော့ မဟုတျပါဘူး။ အမနေဲ့အဖကေလညျး ကြှနျတေျာ့ကို မုနျ့ အငတျမထားပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဂိုးလျဒငျးဘတျတှေ အမွဲဝယျထားတယျ သံဘူးနဲ့။ ကြှနျတျောကြောငျးသှားရငျလညျး မုနျ့ဖိုးရတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောကတော့ ဥစ်စာစောငျ့ပေးတဲ့ တဈကပျြစကေို့ လိုခငျြတယျ။ အဲဒီတဈကပျြစကေို့ အကုနျသာ သုံးမပဈလိုကျနဲ့။ ဘယျတော့မှ ကုနျမသှားဘူး။ လြှော့မသှားဘူး။ အဲဒါကို ကြှနျတျောက သဘောကတြာ။
ကြှနျတျောသာ ဥစ်စာစောငျ့ဆီက တဈကပျြစရေ့ရငျ အမကေို့ ဥစ်စာစောငျ့က ပိုကျဆံပေးတယျဆိုတာတော့ မပွောဘူး။ တျောကွာ အမကေ ကြှနျတေျာ့ကို မုနျ့ဖိုးပိုကျဆံ မပေးတော့ရငျ ခကျမယျ။ ဒါပမေဲ့ ဥစ်စာစောငျ့တှကေ ဘယျမှာရှိတာလဲဆိုတာ ကြှနျတျောလညျး မသိဘူး။ အမမြေား သိမလား။
”အမေ သရဲတှကေ အထီး၊ အမ ရှိလားဟငျ”
”သရဲထီး၊ သရဲမ ရှိတာပေါ့ ငါ့သားရယျ”
”ဒါဖွငျ့ ဥစ်စာစောငျ့တှကေတော့ အထီးနဲ့ အမရှိတာလား အမေ”
”အမတေော့ ဥစ်စာစောငျ့မတှကေိုပဲ ကွားဘူးတယျ”
”ဥစ်စာစောငျ့မတှကေို အမကေော မွငျဘူးသလားဟငျ”
”အမတေော့ မမွငျဘူးပါဘူးကှယျ။ ဥစ်စာစောငျ့မတှဟော ဆံပငျအရှညျကွီးနဲ့ မကျြနှာကလညျး သနပျခါးဖှေးပွီး လှတယျ။ အနံ့ကလညျး သငျးတယျလို့ ပွောကွတာတော့ ကွားဘူးတယျ”
”သဘောကောငျးတယျလညျး မမှတျနဲ့ ငါ့သားရယျ။ သူတို့က သူတို့နရောမှာ လူလဲတတျတယျ”
”ဘယျလို လူလဲတာလဲ အမေ”
”ဥစ်စာစောငျ့ဘဝမှာ ကွာလာတော့ ပငျြးရိငွီးငှမှေ့ာပေါ့ကှယျ။ ဘုရားရဲ့ ရတနာသိုကျကိုလညျး စောငျ့ဖို့ တာဝနျရှိတော့ သူ့နရောကို လူတဈယောကျနဲ့ အစားထိုးဖို့ လူရဲ့ဝိညာဉျကို သူတို့က နှုတျသှားတာပေါ့”
”သူတို့က ဘုရားတှမှော တာဝနျထမျးတာလား”
”အေးပေါ့။ သိုကျတူးတဲ့လူတှေ မလာအောငျလို့ပေါ့”
”သူတို့က တဈခါတလေ လူလိုအယောငျဆောငျပွီး ဘုရားပှဲတှမှော ဈေးတောငျ ဝယျတတျတယျတဲ့ သားရဲ့။ ပိုကျဆံရှိလို့နမှောပေါ့”
”သူတို့က မိနျးမအခငျြးခငျြးကိုပဲ ဝိညာဉျနုတျမှာပါ အမရော။ ကြှနျတျောက ယောကျြားလေးပဲ။ ကြှနျတေျာ့ ဝိညာဉျကို သူတို့ မနုတျပါဘူး”
”လူဆိုတာ ခုဘဝမှာ ယောကျြားလေးဖွဈပမေယျ့ နောကျဘဝမှာ မိနျးမလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ။ သူမြားသားမယားကို ကြူးလှနျရငျ နောကျဘဝမှာ မိနျးမရှာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ”
အမကေ ပွောပွနတေယျ။ ကြှနျတျောကတော့ လှတဲ့ဥစ်စာစောငျ့ဆီက ကပျြပွားစကေို့ လိုခငျြနတေယျ။ အဲဒါကို အမေ သိနသေလား။
”ဘုရားတှထေဲ တဈယောကျတညျး သှားမထိုငျနဲ့နျော။ ဥစ်စာစောငျ့က လူကိုခဈြရငျလညျး သူတို့ဆီ ချေါထားတတျတယျ။ ဥစ်စာစောငျ့က ငါ့သားကို ဝှကျထားရငျ အမေ မရှာဖှတေတျဘူးနျော”
ကြှနျတျောက သပွပေနျးခြိုးပွီး ဘုရားညောငျရအေိုး ထိုးတယျ။ အုတျပလ်လငျပျေါမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရငျး ကပျြပွားစတေ့ဈစေ့ တှမေ့လားလို့ အမွဲရှာဖှတေယျ။ ဘုရားပနျးအိုးထိုးတာကို ဥစ်စာစောငျ့မက သဘောတှကေပြွီး ကြှနျတေျာ့ကို ကပျြဒင်ျဂါးပွား တဈစလေ့ောကျ လကျဆောငျပေးရငျတော့ ကြှနျတျော ကနြေပျပါပွီ။
အဲဒီလို ဘုရားမှာ သပွညှေနျ့သှားထိုး၊ ညောငျရအေိုး ရလေဲ၊ အုတျပလ်လငျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျ၊ သောကျတျောရခှေကျလေးနဲ့ ဘုရားကို သောကျတျောရကေပျလုပျတာ တဈလကြျောကွာသှားပါတယျ။ တဈမနကျခငျးပျေါမှာ ဘုရားရဲ့ အုတျပလ်လငျပျေါမှာ ကြှနျတျောဟာ ကပျြပွားစလေ့ေးကို တကယျတှတေ့ယျဗြာ။ ဘယျလိုကို ပြျောမှနျးမသိဘူး။ ထီပေါကျတာက အဲဒီလိုလား။
အိမျမှာလညျး ငှဖေလားလေးတဈလုံးရှိတယျ။ အမကေ ငှဖေလားလေးကို မသုံးပါဘူး။ ဒီအတိုငျး သိမျးထားတာ။ အဲဒီငှဖေလားလေးထဲမှာ ကပျြပွားစလေ့ေးကို ထညျ့လိုကျတယျ။ ဘုရားစငျရဲ့ ထောငျ့လေးတဈနရောမှာ အမလေညျး မမွငျသာအောငျ တဈညထားတယျ။ နောကျနမှေ့ာ အဲဒီကပျြပွားစနေဲ့ ကြောငျးမှာ တရုတျကွီး ဆနျခေါကျဆှဲ တဈမတျဖိုး ဝယျစားတယျ။ သူက မတျစသေုံ့းစေ့ အမျးတယျ။ ညကြ အဲဒီမတျစေ့ သုံးစကေို့ ငှဖေလားထဲထညျ့တယျ။ ဘုရားစငျထောငျ့တဈနရောမှာ ကြှနျတျောက အသာလေးတငျထားတယျ။
နောကျ မနကျခငျးမှာ ငှဖေလားလေးထဲမှာ ကပျြပွားစေ့ ဖွဈနပွေီအထငျနဲ့ ကြှနျတျော သှားကွညျ့တယျ။ မတျစသေုံ့းစဟေ့ာ သုံးစပေ့ါပဲ။ နောကျတဈနေ့…နောကျတဈနေ့ ကြှနျတျောဟာ ဘုရားစငျရဲ့ ထောငျ့လေးတဈနရောက ငှဖေလားလေးထဲကို ကွညျ့တာပဲပေါ့။ တဈမတျစေ့ သုံးစဟေ့ာ တဈမတျစေ့ သုံးစပေဲ့ပေါ့။ ဘယျတော့မှ ကပျြပွားစေ့ ပွနျဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး။ ပနျးတှနေဲ့ ဝနေမေယျ့၊ သနပျခါးနံ့တှလေညျး သငျးထုံနမေယျ့၊ ဆံပငျကလညျး ရှညျလြားတဲ့ ဥစ်စာစောငျ့ဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ညာခဲ့ပွီလား။
နောကျရကျမှာ ဘုနျးကွီးကြောငျးဝငျးထဲက အာရုံခံတနျဆောငျးထဲမှာ ကြှနျတျောဟာ ဘုရားညောငျရအေိုး သှားလဲတယျ။ အဲဒီမယျ မကျြနှာပျေါမှာ ကြောကျပေါကျမာတှနေဲ့ ရှာထဲက မပုကွှကေို တှရေ့တယျ။ သူကလညျး ဘုရားကို ပနျးလာကပျတာ။
”ဟဲ့ကောငျ ဟိုရကျက ဒီဘုရားရဲ့ အုတျပလ်လငျပျေါမှ ငါ ကပျြပွားတဈစေ့ ကကြနျြရဈခဲ့တယျ။ နငျ တှလေ့ား” တဲ့။
”မတှပေ့ါဘူး မပုကွှရော”လို့ ကြှနျတျောပွောပွီး အဲဒီနရောကနေ ပွနျထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ ။
Previous Article မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
Next Article အိုးး မေမေရေ အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရသည် အမေစုကို ချစ်တဲ့ မြင်းမူမြို့က မိန်းခလေး (ရုပ်/သံ)